Kulamo siyaasadeed oo ka billowday BELEDWEYNE - Caasimada Online
Home Warar Kulamo siyaasadeed oo ka billowday BELEDWEYNE
Kulamo siyaasadeed oo ka billowday BELEDWEYNE
Beledweyne (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi ay xalay ka billowdeen kulamo ay leeyihiin siyaasiyiinta & xildhibaanada beesha Xawaadle ee shalay gaaray magaaladaas.
Kulamada oo ah kuwa xasaasi ah ayaa waxaa qeyb ka ah madaxweyne ku xigeenka HirShabelle, Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, madaxweynihii hore ee maamulkaasi Mudane Cali Cabdullahi Cosoble, wasiirkii hore ee amniga Cabdirisaaq Cumar, wasiirkii hore waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre, xildhibaan Qoone iyo taliyihii hore ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, kuwaas oo shalay ka dagay Beledweyne.
Intooda badan waxaa kulamadan oo ay qeyb ka yihiin mas’uuliyiinta gobolka Hiiraan diirada lagu saarayaa tabashada reer Hiiraan ee ku aadan dhismaha HirShabelle.
Mas’uuliyiinta kulmada ka billaabay Beledweyn ayaa sidoo kale shirar gaar gaar ah la yeelan doono odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka soo jeeda beesha Xawaadle.
Sidoo kale waxaa la filayaa inay General Xuud ku qanciyaan in madaxweynaha HirShabelle uu si nabad ah ku imaado magaalada, iyada oo markaan ay u muuqato in loo ogolaan doono inuu ka dago Beledweyne, waa sida ay sheegaan ilo wareedyo lagu kalsoon-yahay.
Ujeedka dhaq-dhaqaaqyada siyaasadeed ee haatan ka socda Beledweyne ayaa ah kuwo xal raadin ah, maadaama lagu wado in magaaladaasi lagu qabto doorashada Golaha Shacabka.
Tan iyo markii madaxweynaha maamulka HirShabelle loo doortay Cali Guudlaawe ayaa waxaa Beledweyn ka taagnaa xiisad ka dhalatay doorashadii ka dhacday Jowhar.
Si kastaba, HirShabelle ayaa haatan wajaheysa culeyskii ugu xooganaa, kaas oo sameeyey doorashooyinka dalka, maadaama ilaa iyo hada aysan ka bilaaban doorashada Aqalka Sare.